Ahoana ny fomba hahatonga mpivarotra tena mahomby amin'ny Amazon?
Ny mpivarotra an-tserasera mivantana amin'ny Amazon dia tokony handray fanapahan-kevitra hentitra tsara foana. Ary raha ny mikasika ny lisitra fanatsarana ny vokatra, dia mandingana izany tsy misy ny angona sokajy ilaina rehetra miaraka amin'ny fahaiza-misaina mahasarika fifaninanana - dia tsy hahazo ny lozam-pifamoivoizana an-dalamby mankany amin'ny toeran'ny mety tsara amin'ny fanangonana fidiram-bola maharitra. Noho izany, andeha hojerena izany - raha te-hijery ny tenanao ho mpivarotra tanimbary amin'ny Amazon ianao, mandray soa avy amin'ny fitohizan'ny mpividy mpizahatany mitombo, fotoana mahalalanao ny fitaovana fikarohana momba ny siansa ianao ary farany ahafahanao manokatra tsara ny vokatrao.
Amin'izany fomba izany, dia hanana safidy matanjaka kokoa ianao amin'ny fijanonana eo an-tampon'ilay fikarohana. Farany, hanangon-java-tserasera bebe kokoa amin'ny lisitry ny vokatra Amazon ianao, izay mety ho vokatra avo kokoa amin'ny fiovam-po, amin'ny fihodinana amin'ny famolavolana ny laharana ankapobeny eo amin'io tsena mahavariana io.
Ary ety ambany dia hasehoko anao fa iray amin'ireo fitaovana maotina tsara indrindra azonao atao amin'ny alalana malalaka - federal fd2 tyre review. Ny mpivarotra rehetra amin'ny Amazon dia tokony hahafantatra izany, azoko antoka. Mariho anefa, fa tsy miresaka momba ny fampiroboroboana na ny fandraràna an'Andriamanitra aho amin'ny fanosehana karazana rindrambaiko hafa an-tserasera na fitaovam-pifanakalozan-dronona Amazon ho an'ny tanjona ara-barotra. Ataovy toy ny samaritan tsara sitra-po ary vonona ny hizara ny traikefa niainako taloha teo aminao niaraka taminao ry zalahy. Mba tiako sy ankasitrahako, ny solosaina misy solosaina iray ho an'ny fivarotana varotra ho an'ny varotra Amazon - SECockpit. Andeha hojerentsika ihany hoe inona izany.
Ity no fitaovana fikarohana fototra fototra tiako hampisehoana anareo anio. Raha ny marina, SECOCKpit dia tsy tenifototra tokana tokana. Raha tokony ho marimaritra kokoa dia serivisy tontolon'ny tolotra aterineto feno natao ho an'i Amazon fotsiny, fa ho an'ny fanatsarana ny lisitry ny lisitry ny vokatra ecommerce ao amin'ny Internet ka ho hita eo amin'ireo valin'ny fikarohana. Midika izany fa mifamahofaho ara-bakiteny ny zavatra rehetra mety ilainao toy ny mpivarotra enta-madinika amin'ny Amazon.
Ireto ny sasany amin'ireo tombontsoa tena tiako indrindra tamin'ny lisitry ny vokatra avy amiko manokana:
haingana dia mamolavola haingana ny lisitr'ireo teny manan-danja azo atao;
dia mahatakatra ny fironana fototra amin'ny fikarohana mpikaroka lavitr'ezaka ary mahazo fanampiana amin'ny soso-kevitra sarobidy;
dia mamela fahafahana bebe kokoa sy manatsara kokoa ny fahafaha-manatsara kokoa - amin'ny fomba fijery mifaninana amin'ny teny fanalahidy mivantana mivantana avy amin'ireo mpivarotra lehibe ao amin'ny sokajin'ny vokatrao na ny tsenan'ny marika amin'ny Amazon;
dia manara-maso ny dikan-teny ankapobeny misy ankehitriny - ny fampisehoana ny lisitry ny tenanao manokana, ary ny fandrosoana tsara indrindra amin'ireo mpanohitra akaiky anao izay efa mihazakazaka tsara amin'ny tenimiafina voambolana voafaritra tsara na ny fitambaran-tadim-pitomboana tsara indrindra;
dia mandray soa avy amin'ny tahirin-kevitra tena ambony sy tsy misy ifanarahana, farafaharatsiny mandritra ny 30 andro fitsapana azo atao amin'ny alalana malalaka. Mampalahelo, raha te-hanana tanjona ambony kokoa ianao, dia mila mandalo ny fizotran'ny famandrihana, ary mazava ho azy, mando vola isam-bolana.